Iprofayili Company - Xizi elevator Co., Ltd
kwingxelo yamajelo eendaba
umkhweli flow mpo
umkhweli flow Horizontal
XIZI zekheshi CO., LTD i oluncedisayo ngokupheleleyo-owned of XIZI UHC, kunye igama lebrendi of "XIZI" (ezaziwa ngokuba "XIZI"). Le nkampani ijolise kwiimarike isiphelo eziphakamileyo, ejolise ekuphuhlisweni ebonakalayo qhinga ilifti loshishino XIZI UHC. Le XIZI brand kunokuba umva onokuphanda ukuya kunyaka ka 1981. Ukuza kuthi ga ngoku, le brand ngenkulungwane ye-cross kuye kwaqhubeka iminyaka engaphezu kwama-30, yaye uye walungiselela izisombululo ubalaseleyo yokuhamba yokwakha kumazwe angaphezu kwama-60 kunye neziphaluka ehlabathini, njalo iphumelele ukuqaphela market kunye neqabane likuthembe. XIZI iyavumelana ukusuka ekuqaleni ukuya ekupheleni, ethanda emva fundament ekuphumeni, ekubakhupheni imveliso egqibeleleyo azive wokumquqela ebufundisini.
Kwikomkhulu XIZI imi lwedike ka Qingshan Lake eyaziwa ngokuba "i-Green Silicon Valley". Le nkampani iye ingqukuva ebhalisiweyo RMB million 2.155 yuan kunye malunga nabasebenzi 3,000. It is a phambili isiphelo-high sifikelele lwamashishini eTshayina, ingqalelo kuyilo ezihlangeneyo, R & D, ukwenziwa, ukuthengisa, ukufakela kunye nenkonzo emva-ukuthengiswa kweemveliso ezizihambelayo. Products zenkampani kubandakanya umkhweli ikheshi, ikheshi obanzi, Machine roonless elevaror, ikheshi esibhedlele, kwempahla ikheshi, ezizihambelayo, yokuhamba, ikhaya ikheshi njl, ngenxa uthotho-8 kunye neentlobo ilifti phezu-10.
Le nkampani iye yabeka unyawo kushishino phantse 35 iminyaka, uye uphando lwezenzululwazi eqinileyo kunye ezintsha namandla. Ngoku anazo ngaphezulu kwama-300 abasebenzi zobugcisa, iiprojekthi lomenzi 60, wamkela iiprojekthi-20 eziphambili zophando kunye nophuhliso kunye uqala-3 okanye iimveliso ezintsha averagely ngamnye ngonyaka 4. Okwangoku, le nkampani corporately kumisa XIZI Research Institute of Zhejiang University kunye University Zhejiang. Ukubambisana ngokubanzi neeyunivesithi abaziwayo ezifana Tsinghua University kunye Shanghai Jiaotong University, XIZI iye yaseka iziko layo R & D iziko, imveliso & ukwenziwa, iqonga ezintathu iziko lokuhlola umgangatho ngethuba ekufuneni zobungcali iimveliso, yotshintsho mveliso kwaye ukuphefumla lweshishini. Ukubambelela umba "Inkqubela kunye Times, Continuous Innovation", inkampani isoloko egcine ukhuphiswano olomeleleyo.
Le nkampani iye sele ziqinisekiswe Quality Management System ISO9001, ISO14001 Environmental Management System, OHSAS18001 Umsebenzi Health and Management System Ukhuseleko ukungena kwimarike ngezatifikethi nqanaba liphezulu ehlabathini, ezifana CE isatifikethi EU market ukwamkela imveliso ekhokelela, iziqinisekiso CSA for North America market zingeniswe, njl Le nkampani ayiphetheyo mvume ye kwinqanaba eliphezulu lemveliso kwishishini basekhaya ufakelo level A, inguqu kunye nemvume yesondlo.
Uthungelwano ukuthengisa inkampani eyenza ipateni qhinga "kwikomkhulu Omnye, iingingqi ezintlanu ezinkulu", kunye neemveliso yandisa phezu kuzo zonke iindawo zeli lizwe. XIZI uye wamisa 34 iiofisi zamasebe kunye nee-arhente 28 kwizixeko ezahlukahlukeneyo engundoqo, efana Hangzhou, Jinan, Changsha, Xiamen, Chengdu, Chongqing, Tianjin, Xi'an, Hefei kunye Nanjing, njl, benza ukunika "omnye-stop ' full-service kubaxumi. ezi zixhobo ikheshi lithunyelwa kumazwe-70 kunye neendawo kubandakanywa eYurophu, kuMbindi Mpuma, mpuma Asia kunye Australia, etc. Kusenjalo, inkampani iye yaseka ii-arhente ezahlukeneyo olupheleleyo kunye namaqabane zentsebenziswano ixesha elide qhinga yaye ayila a kakuhle kusekwa intengiso oversea kunye nenkqubo nkonzo.
"Ozithobileyo inkonzo ikheshi nganye, ukunika ekhuselekileyo kunye neemveliso kubathengi elide" i-bulumko soshishino XIZI. Le nkampani kwelokuthi Umoya lweshishini le ukusukela ezingisileyo ukhuseleko, ukusebenza, amandla-ugcino kunye nentuthuzelo iimveliso, ukwenzela ukunika udidi lobugcisa ihlabathi, imveliso kunye inkonzo kubathengi.